Mnet Music Chart ရဲ့ Top3သီချင်းတွေအကြောင်းကို စပ်စုကြည့်ကြရအောင်
On March 23, 2018 March 23, 2018 By shwe yi
အားလပ်ရက်မှာ သီချင်းကောင်းကောင်းလေးတွေနားထောင်လို့ရအောင် Mnet Real Time Music Chart ရဲ့ မှာ Top3နေရာမှာရှိနေတဲ့ သီချင်းလေးတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါ့မယ်။
ပထမ List ကတော့ ယနေ့ မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့အတွက် Top3နေရာမှာရှိနေတဲ့ သီချင်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။
1. Sudden Shower (Yong Jun Hyung [Feat. 10 cm])
နံပါတ် ၁ နေရာကိုရောက်ရှိနေတဲ့သီချင်းလေးကတော့ Hight Light အဖွဲ့ဝင် Yong Jun Hyung နဲ့ 10 cm (Feat.) တို့ရဲ့ “Sudden Shower” ဆိုတဲ့သီချင်းလေးပါ။ ဒီသီချင်းလေးကတော့ မနေ့ကမှ Release လုပ်ခဲ့တဲ့ သီချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ သီချင်းပုံစံလေးကတော့ အဆွေးသီချင်းလေးပါ။ အိမ်မှာ အေးအေးဆေးဆေး Coffee လေးသောက်ရင်း နားထောင်ရင်တော့ အလွန်မှလိုက်မှတဲ့သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ။
2. Boomerang (Wanna One)
နံပတ်၂ နေရာမှာ ရှိနေတဲ့သီချင်းလေးကတော့ မတ်လ ၁၉ ရက်နေ့က Release လုပ်ခဲ့တဲ့ Wanna One ရဲ့ “Boomerang” သီချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။
3. Starry Night (Mamamoo)
နံပါတ် ၃ နေရာမှာတော့ Mamamoo ရဲ့ Comeback Song လေး “Starry Night” သီချင်းလေးပါ။ အဖွဲ့ဝင်လေးယောက်ကို အမိုက်စားပုံစံလေးနဲ့ MV ထဲမှာတွေ့ရမှာပါ။ “Starry Night” က Mamamoo ရဲ့ဆိုနေကျ သီချင်းပုံစံထဲကနေ အနည်းငယ်ကွဲထွက်နေတဲ့ EDM ပုံစံလေးပါ။ အရမ်းမိုက်တဲ့ သီချင်းလေးမို့ နားထောင်စေချင်ပါတယ်။
နောက်ပြီးတော့ Mnet Weekly Music Chart ရဲ့ Top3နေရာမှာရှိနေတဲ့ သီချင်းလေးတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်~
1. Look (Got 7)
“Look” က မတ်လ ၁၂ ရက်နေ့က Released လုပ်ခဲ့တဲ့ Got7ရဲ့ Comeback Song လေးဖြစ်ပြီး ပုံစံကတော့ Got7ရဲ့ အရင်သီချင်းတွေရဲ့ လုံးဝကိုကွဲထွက်နေပါတယ်။ MV လေးကလဲ အလန်းစားလေးမို့ ကြည့်ကြည့်ပါဉီးလို့။
2. Flower Road (BigBang)
အဖွဲ့ဝင်တွေအကုန်လုံးနီးပါး စစ်မှုထမ်းဆောင်နေချိန်မှာ ထွက်ရှိလာတဲ့ BigBang ရဲ့ “Flower Road” သီချင်းက ၂ လလောက်နီးပါး ကြာပြီးမှထွက်ရှိလာတဲ့ Comeback သီချင်းလို့ပဲဆိုရမှာပါ။ သီချင်းကိုနားထောင်ပြီးတာနဲ့ စိတ်ထဲမှာမှတ်ချက်ချမိတာကတော့ “BigBang ဆိုတာ BigBang” ပါပဲ ဆိုတာပါပဲ။ Artist ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ထိုက်တန်လှတဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်လို့ပဲဆိုချင်ပါတယ်။
အရမ်းလန်းတဲ့ MV လေးနဲ့ Mamamoo ကိုတွေ့မြင်ရမယ့်အပြင် နားထောင်လိုက်တာနဲ့ Fresh ဖြစ်တဲ့ ခံစားမှုကိုခံစားရမှာပါ။ အများကြီးမပြောတော့ပါဖူး နားထောင်ရလိုက်လို့ နောင်တလုံးဝမရစေရပါဖူးလို့ အာမခံပါတယ်။ နားထောင်ကြည့်ပါလို့။
PREVIOUS POST Previous post: Fifth Harmony, One Direction နဲ့ Simon Cowell တို့ရဲ့ အံ့သြဖွယ်ကံကြမ္မာ
NEXT POST Next post: အဆိုပြိုင်ပွဲတွေကနေ ကျော်ကြားလာခဲ့ကြတဲ့ အဆိုတော်များ